पर्यटकको रुपमा अमेरिका आएका नेपालीले काम गर्न पाउछन त ? - Enepalese.com
पर्यटकको रुपमा अमेरिका आएका नेपालीले काम गर्न पाउछन त ?
इनेप्लिज २०७५ भदौ २३ गते ११:३० मा प्रकाशित
विजय थापा ,अमेरिका आउन मानिसले हजार दाउ खोज्दछन । मानिस निरन्तर अनेक जुक्ति लगाएर आई रहेका पनि हुन्छन । अमेरिका आए पछि फर्कनु भनेको दुर्लभ चीज हुन्छ । सरकारी कामकाज तथा अन्य सभा सम्मेलन तथा अन्य चिजमा आएका मानिस नफर्कने भन्ने चाही हैन । ६५ बर्ष मुनि सम्म उमेरका मानिस अमेरिका नै बस्न मन पराउदछ्न । त्यो भन्दा माथि उमेरका मानिसहरु नेपाल बाहिर बस्न चाहदैनन् । तर अब मौका मिल्यो भने ३ पुस्ता संगै अमेरिका बस्ने चलन वृद्धि हुदै छ ।
तीजमा महिलाहरु संग संग नेपाल माईत कति सम्झनु हुन्छ भन्ने जिज्ञाशा राख्दा अधिकांशले अमेरिकामै बुवाआमा भएको बताए भने पुरुषहरुले पनि सबैजना यतै भएको जवाफ दिए पछि अमेरिकामा ३ पुस्ताहरुको संख्यामा वृद्धि भएको पुष्टि भएको छ ।
अमेरिका अनेक रुपमा छिरेका मानिस किन अमेरिका आएर काम गर्न चाहन्छन ? किन यतै कागजात बनाएर बसोबास गर्दछन । यस बारेमा ज्यादा ब्याख्या गर्नु पर्ने जरुरी नै छैन ।
तर कुनै तरीकाले अमेरिका आए पछि आतेजाते बाटो खर्च किन निकाल्न चाहन्छन ? त्यसको लागि काम गर्नु पर्ने हुन्छ । पहिले अलिक सरल र खुकुलो थियो । पर्यटक तथा अन्य रुपमा छिरेका मानिसले काम पाउथे । अहिले पनि नपाउने भने चाही हैन । तर अहिले ट्रम्प प्रशासनले कडा गरेको कारण मानिसहरुमा भय छ । डर र त्रास भएको कारण कसैले पनि हत्तपत्त जोखिम लिन चाहदैन । तर यसो भन्दैमा यसरी अमेरिका छिरेकालाई काम पाइदैन भन्ने चाही हैन ।
जोखिम उठाएर,व्यक्तिगत ,निजि तथा नगदमा काम दिने मानिसहरु र व्यक्तिगत ब्यबसाय तथा ब्यापारहरु पनि छन् । अब अमेरिका जानै भएन भनेर सोची रहनु पर्दैन । कुनै कारण या म्याद समेत गुज्रिएका या समय अवधि भित्र नेपाल फर्कन नसकेकाले त्यतिकै अमेरिका छिरेकाले काम पनि गरि रहेका हुन्छन ।
कागजपत्र नभएकाहरु पनि ढुक्कले काम गर्ने अवस्था यति खेर छैन । तर यसो भन्दैमा अमेरिका जाने र काम गर्ने भन्ने कुरामा एक पटक सोच्नु पर्ने हुन्छ । र काम दिने र रोजगारी दिने संस्थाले पनि पहिलाको जस्तो सरल रुपमा कागजात नभएका अर्थात् अमेरिकामा काम गर्न पाउने अनुमति भएका नभएकालाई दिन गार्हो मान्दछन ।
यदि तपाईहरु अमेरिका आए पछि आफ्नो उद्धेश्यलाई परिवर्तन गर्न चाहनु हुन्छ भने सबै भन्दा पहिला युनाईटेड स्टेट्स शिटीजनशिप एण्ड ईमी ग्रेसन सर्भिस (युएससिआईएस ) लाई आफ्नो अमेरिका बसाईको म्याद बित्नुभन्दा अगाडी उचित आबेदन पत्र भरेर अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ ।
उदाहरणको लागि तपाई पर्यटक प्रवेशआज्ञामा आउनु भएको छ तर तपाई बिद्यार्थी बन्न चाहनु हुन्छ भने तपाईले अनिवार्य रुपमा आफ्नो दर्जा (स्टाटस )परिवर्तनको लागि निवेदन दिनै पर्छ । जव तपाई अमेरिकामा आफ्नो पर्यटक दर्जा बाट बिद्यार्थी या अन्य कुनै दर्जामा रहनु चाहनु हुन्छ भने युएससिआईएसमा निवेदन दिन ढिलो नगर्नु होला ।
अमेरिकामा कानुनी कागजात नभई काम गर्न कदापी पाइदैन । जस्ले पाई रहेको छ त्यो सौभाग्य हो । र, ईश्वरको कृपा ठान्नु पर्दछ । अमेरिकामा यसरी मानिस नपाइएमा नगदमा काम गर्नेहरुलाई भर्ना गर्ने गरिन्छ । यो एउटा ठुलो चुनौती र जोखिम हो । यो कदापी गर्नु हुदैन ।
स्मरण रहोस ,अमेरिकामा प्रहरीले कहिले पनि बाटोमा र कही पनि तेरो परिचय देखा भन्दैन । तर बिशेष शंका ,बिशेष कारण र घटना भएमा सोध्न पनि सक्छ । अमेरिकामा भुलेर पनि अपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुनु हुदैन । यदि अमेरिका छिर्नु भएको छ भने अधिवक्ता संग परामर्श अनिवार्य रुपमा लिनु पर्छ ।
यदि तपाई पक्राउ पर्नु भयो भने आफ्नो दर्जा (स्टाटस ) गुमाउन सक्नु हुन्छ र सथौ देश निकालामा पर्नु हुन्छ । यसो भन्दैमा डर र त्रास भन्ने कुरा हुदैन । अमेरिकामा एक करोड भन्दा ज्यादा बसोबास गर्छन ।
यदि तपाईले अर्काको सामाजिक सुरक्षा दर्जा प्रयोग गर्नु भएको छ भने इमिग्रेसन एण्ड नेचु र लाई जेसन सर्विसले पत्ता लगाउदछ । बिना कागजात पक्राउ परेमा के के दण्ड हुन्छ ।
यदि गैर कानुनी रुपमा १ बर्ष भित्र पक्राउ परेमा र ब्यापारमा संलग्न भएको पाइएमा ३ देखि ५ बर्षको लागि अमेरिकाबाट देश निकाला हुने हुन्छ । यदि एक बर्ष भन्दा ज्यादा समय देखि गैर कानुनी रुपमा काम ब्यापार गरेको पाईएमा १० बर्षको लागि अमेरिका बाट निकाला गरिन्छ । यदि सीमा सुरक्षा अधिकारीलाई झुटा बयान दिएमा ५ बर्षको लागि अमेरिकाबाट निकाला गरिन्छ ।
यी सबै निर्णयहरूअन्तिम हुन् र यी निर्णयहरू उल्टाउने कुनै तरिका हुदैन । यी प्रतिबंधहरूले न केवल व्यक्तिहरू मात्र होइन कि प्रतिष्ठानहरु जसको लागि उसले / उनले काम गरेका छन् । उनीहरुलाई पनि असर पर्दछ ।
जब कुनै व्यक्ति संयुक्त राज्यबाट प्रतिबन्धित भएको छ, उनीहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिका पुन फर्कनको लागि अमेरिकी क्षमायाचनाको अनुमति अमेरिकी सरकार बाट प्राप्त गर्न आवश्यक हुन्छ ।
जव सम्म तपाईलाई युएससिआईएसले अनुमति दिएको पत्र प्राप्त हुदैन यो नसम्झनु कि आफ्नो निवेदन स्वीकृत भयो भनेर । स्वीकृत हुनु अगावै सपना नबुन्नु होला । साथै आफ्नो क्रियाकलाप परिवर्तन पनि नगर्नु होला । उदाहरण ,तपाई गैर आप्रवासी पर्यटक हुनु हुन्छ भने कुनै पनि बिद्यालय भर्ना हुनु हुदैन ।
साथै यदि तपाईले ब्यबसायको कारणको लागि अमेरिकामा भर्ना हुन् पाउनु भयो भने तपाईलाई आफ्नो गैरआवासीय वस्तुस्थिति परिवर्तन गर्न आवेदन आवश्यक पर्दैन । जव सम्म तपाईको म्याद समाप्त हुदैन तपाई निर्धक्क संग बस्न पाउनु हुने छ ।
यसै गरि यदि तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिकाका विद्यालय भर्ना हुन् चाहानुहुन्छ भने तपाईंलाई आफ्नो (नन इमिग्रेन्ट स्टाट्स ) गैरआवासीय दर्जा परिवर्तन गर्न आवेदन आवश्यक पर्दैन यदि तपाई अमेरिकामा बर्तमान अवस्थामा बसी रहेकोको जीवन साथी अथवा सन्तान हुनु हुन्छ भने निम्न अवस्थाका गैरआवासीय प्रवेश आज्ञा छन् भने :
कुटनैतिक र अन्य सरकारी आधिकारी तथा कर्मचारी ( ए प्रवेशआज्ञा वर्ग ,ए भिसा क्याटागोरी )
अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय तथा लगानीकर्ता ( ई प्रवेशआज्ञा )
अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका प्रतिनिधिहरु तथा तिनीहरुका कर्मचारी ( जी प्रवेशआज्ञा ,भिसा )
अस्थाई कामदार ( एच भिसा ,प्रवेशआज्ञा )
बिदेशी संचार माध्यमका प्रतिनिधिहरु ( आई भिसा ,प्रवेशआज्ञा )
आदान प्रदान आगन्तुकहरु (जे भिसा )
शैक्षिक (एफ भिसा) वा व्यावसायिक (एम भिसा) विद्यार्थीहरू (तपाइँ केवल प्राथमिक, मध्य वा उच्च विद्यालयमा भर्ना हुन् सक्नुहुन्छ: यदि तपाइँ माध्यमिक बिद्यालय पछिका बिद्यालयमा पूर्ण-समय उपस्थित हुन चाहानुहुन्छ भने तपाईले स्थितिको परिवर्तनको लागि आवेदन गर्नु पर्छ)।
यदि तपाईले निम्न श्रेणीमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका बिद्यालयमा भर्ना हुनु भयो भने तपाईले तपाइँको गैरआवासीय वस्तुस्थिति परिवर्तन गर्न आवेदन गर्न सक्नुहुन्न:
भिसा वेभर प्रोग्राम क्रू मेम्बर अर्थात् प्रवेश आज्ञा त्याग्ने कार्यक्रम समूह सदस्य (डी गैरआवासीय प्रवेशआज्ञा )
संयुक्त राज्यको माध्यमबाट पारगमनमा( सी गैरआवासीय प्रवेश आज्ञ )
प्रवेश आज्ञा बिना संयुक्त राज्य अमेरिका मार्फत मार्ग (टिडब्लुओभी)
अमेरिकन नागरिकका भावी दुल्हा या दुलही अथवा भावी दुल्हा या दुलही का आश्रित ( के गैरआवासीय प्रवेशआज्ञा )
सूचनाकार (परिवारको साथमा ) आतंकवाद वा संगठित अपराध (एस गैरआवासीय प्रवेश आज्ञा )
यदि तपाई एक व्यावसायिक विद्यार्थी हुनुहुन्छ (एम -१ ), तपाई आफ्नो स्थिति (ए) मा परिवर्तन गर्न आवेदन गर्न सक्नु हुन्न:
शैक्षिक बिद्यार्थी (एफ-१ )
यदि तपाई अन्तर्राष्ट्रिय विनिमय आगन्तुक हुनुहुन्छ (J-१ ), तपाई आफ्नो गैरआवासीय स्थिति परिवर्तन गर्न सक्नु हुन्न यदि:
तपाईं चिकित्सा प्रशिक्षण (मेडिकल ट्रेनीङ्ग) प्राप्त गर्न अमेरिकाका बिद्यालयमा भर्ना हुनु भयो ।
तपाईं एक आदानप्रदान आगन्तुक(एक्सचेन्ज भिजिटर ) हुनुहुन्छ
यदि तपाईले छुट प्राप्त गर्नु हुन्न भने तपाई केवल एक कुटनैतिक र अन्य सरकारी अधिकारी (ए भिसा) वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू (जी भिसा)का प्रतिनिधिहरू परिवर्तन गर्न मात्र गर्न सक्नु हुनेछ।
स्रोत :बिभिन्न सामग्रीहरु